Fanaraha-maso sy fampiharana ataon'ny mpanjono | Reef Resilience
Ny fitantanana mahomby amin'ny fanjonoana haran-dranomasina dia tsy mahomby raha tsy misy ny rafitra ara-dalàna, ny fampiharana lalàna mahomby, ary ny ezaka fanatanterahana. Na dia izany aza, ny fanontanian'ny manampahefana momba ny tontolo iainana sy ny jono dia manambara zava-misy izay mahazatra any amin'ny firenena rehetra voapoizina: tsy misy sambo sy mpiasa ampy ho an'ny fampiharana, ary rehefa misy ny fanaka, ny mpiasa ary ny fitaovana, vitsy dia voadidy noho ny ny tsy fisian'ny vola ho an'ny ampahany, ny solika, na ny fikojakojana ny fikojakojana. Ankoatra izay, rehefa voatsabo ny mpitsoa-ponenana sy ny mpihaza, ireo olona mandika ny lalàna dia zara raha misy sazy noho ny lalàna mivaivay, ny kolikoly, na ny fanaraha-maso ara-pitsarana tsy misy.
Ireo mpiasan'ny fisafoana ao amin'ny Station Kofiau Field Station dia nihaona tamina mpanjono tsy avy eo an-toerana iray izay miasa tsy ara-dalàna ao anatin'ny faritra voaaro an-dranomasina. Voamarika ny hazandranon'ny mpanjono, ary ampianarina momba ny lalàna mifehy azy izy. Kofiau, ampahan'ny Nosy Raja Ampat any Indonezia, dia miorina ao amin'ny Coral Triangle, faritra misy izay mety ho karazana karazan-dranomasina sy haran-dranomasina manankarena indrindra eto an-tany. Ny vahoaka ao amin'ny nosy Raja Ampat any Indonezia dia miankina amin'ny ranomasina no loharanon-karena lehibe indrindra sy fidiram-bolan'izy ireo. Sary © Jeff Yonover
Ny paikady fitantanana ara-tsiansa toy ny fametrahana faritra marin-toerana (MPA) na ny fanakatonana faritra na jono matetika dia mitaky ny fametrahana rafitra iray ahafahan'ny manampahefana, ny sehatra tsy miankina, ny fikambanana eo an-toerana, ny fikambanana tsy miankina, ny oniversite, ary ireo mpiray antoka hafa zavatra. Ny fametrahana rafitra toy izany sy fanamafisana ny fanajana ny lalàna no fototry ny programa fitantanana tsara.
Ny rafitra fampiharana ny lalàna fampiharana lalàna dia tokony hanilika ireo mpandika lalàna mety tsy hanao hetsika tsy ara-dalàna, satria hiantoka fa ny vokatra / loza ateraky ny tahotra dia mitaky tombony ara-toekarena. Misy singa 5 manan-danja eo amin'ny famolavolana sy fampiharana ny fanaraha-maso mahomby sy ny fampiharana:
Fanaraha-maso sy fisintonana. Ny voalohany dia tsy maintsy mamantatra ny valiny indrindra mahatsikaiky indrindra amin'ny fahita amin'ny fahitana ao amin'ny faritra iray, ary avy eo dia ampiasao ny fampitaovana nomena azy ireo mba hamaliana sy hanilihana ny asa tsy ara-dalàna. Ny valinteny dia miankina amin'ny fahafaha-manao eo an-toerana na eo an-toerana, izany hoe fanaka sy mpiasa, solika, protocoles, sns.
Fanofanana Systematic. Ny fitsipika, ny rafitra ary ny fitaovana dia tsy misy afa-tsy ireo izay nampiofanina hampiasa sy hitazonana azy ireo.
Fanenjehana sy fanamasinana. Tsy ilaina ny mampiasa vola an-tapitrisa dolara amin'ny rafitra mpanara-maso raha tsy misy fiantraikany. Ny fanenjehana ara-panjakana na ny fanenjehana sy ny fanasaziana dia ilaina mba hiantohana ny fanarahan-dalàna.
Fivoarana maharitra. Ny rafitra fampiharana dia mitaky vola. Ny famatsiam-bola ho an'ny orinasa sy ny tetikasa maharitra dia tsy maintsy voamarina sy azo antoka.
Fanabeazana sy fitoriana. Tena zava-dehibe ny manohana ny fividianana vondrom-piarahamonina ary mampahafantatra ny mpandray anjara ny lalàna, ny fitsipika ary ny sazy.
Raha te hianatra bebe kokoa momba ny ampahany tsirairay amin'ny varotra fampiharana, dia tsindrio ny loha manga eto ambany:
Fanaraha-maso sy fanoherana
Ny rafitra mpanara-maso dia tokony hampiditra ny valin-kafatra mahafa-po indrindra amin'ny findram-panadiovana izay manome fampahalalana ho an'ny valiny mety sy ho fahombiazana fandrarana ao amin'ny faritra iray. Matetika dia misy karazana rafitra roa ampiasaina amin'ny fanaraha-maso: fiaraha-miasa sy tsy fiaraha-miasa.
Collaborative Systems surveillance Mila mandefa toerana mavitrika ny sambo amin'ny sambo. Tsy maintsy misy lalàna mandidy ny fampiasana ireo mpandàla fiovam-pitaterana ary mandidy ny sazy ho amin'ny fanesorana. Ny mpanarato dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny dingan'ny fampiharana an'ity rafitra ity. Misy karazany roa ny teknolojia ifotony:
Ny rafitra fanondroana otrikaretina (AIS) dia sari-batam-pifandraisana an-tsambo izay mampiasa ny VHF (High High Frequency) ary mandefa ny fanamorana sambo toy ny sambo, ny lalana, ny haavony, ary ny toerana marina any amoron-dranomasina sy any anaty rano. Ny AIS dia matetika miasa amin'ny fomba fanao ary ny fandrakofan'ny orinasa dia mitovy amin'ny fampiharana VHF hafa. Ny fampahalalana dia alefa any amin'ireo toeram-pivarotana boribory na toeram-pivarotana fiara fitateram-bidy mba hanaraha-maso ny hetsiky ny sambo. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHamaky bebe kokoa momba ny AIS.
Ny rafitra fanaraha-maso ny sambo (VMS) koa dia rafitra fitaterana basy izay mampiasa satelita hanangona sy handefa ny angon-drakitra amin'ny sambo, toerana, fianarana, sns. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHamaky bebe kokoa momba ny VMS.
Pros sy ny tsy firaharahan'ny rafitra fiaraha-miasa. Loharano: WildAid
Collaborative System Pros
Ny AIS dia manara-maso ny fotoana hanaraha-maso ny sambo kely sy haingam-pandeha.
Ny VMS dia manome fampahalalana ny toerana eo amin'ny faritra lehibe sy ny ranomasina misokatra. VMS dia mandefa hafatra hafahafa (tsy misokatra amin'ny vahoaka, fa mivantana amin'ny manampahefana).
Ny saram-pitateram-bola sy ny fandaniana amin'ny AIS sy VMS dia ambany ihany (saran'ny $ 50,000 ho an'ny rafitra voafetra eo an-toerana ao amin'ny $ 5M + ho an'ny rafitra nasionaly momba ny 8,000 + sambo) sy ny rafitra roa ampiasaina any amin'ny tontolo an-dalam-pandrosoana.
Ny VMS dia manome fampahalalana ny toerana isaky ny ora 1-6, izay tsy mety amin'ny sambo fanaingoana. Ankoatra izany, ny mpandika teny iray dia mandoa $ 800- $ 1,300 ary misy vola isam-bolana mifandraika amin'ny serivisy ($ 20- $ 60, arakaraka ny faharetan'ny signal).
Ny AIS koa dia mitaky ny fividianana ny transceiver. Tsy misy fandaniam-bola miverimberina amin'ny mpanjono rehefa misy ny tobin'i AIS any an-dalamby; Na izany aza, noho ny fiavian 'ny fifindra-monina AIS mankany amin' ny zanabolana dia mety hanjary ho toy izany koa ny fandaniam-bola.
Ny rafitra fiaraha-miasa dia mitaky lalàna iray handidy ny fampiasana azy ireo ary hanomezana fankaherezana ny fananganana. Ohatra, ao Ekoatera, ny fampiasana ny fepetra mifehy ny fepetra ahafahana miditra amin'ny famatsiana solika.
Ireo mpanelanelana dia azo alaina ary mila sazy henjana noho ny fandikana. Any Meksika, misy lalàna iray izay mitaky ny fametrahana ireo mpandraharaha mpanamboatra VMS amin'ny sambo fanangonam-barotra ara-barotra, saingy ny lalàna dia tsy mamaritra sazy ho an'ny fanesorana ny fampandrenesana. Ity teboka ity dia mamela ireo mpanarara hanaisotra ireo mpanelanelana azy ireo raha tsy te-hahita azy ireo.
Ireo rafitra tsy miara-miasa Tsy mila mandefa transceivers na fandraisana anjara amin'ny mpandray anjara ao anatin'ilay dingana. Ireo rafitra fanarahamaso ireo dia mamantatra ireo sambo amin'ny sehatra manokana. Misy karazana rafitra fanaraha-maso tsy miankina maro, toy ny visual, radar, optique (sary nalaina avy amin'ny zanabolana, voina na tsy misy fiara), ary / na fakantsary infrarota. Ireo mpamantatra ireo dia hita eny amin'ny toerana stratejika any amin'ny morontsiraka ary / na hipetraka amin'ny sehatra finday, toy ny fantsom-paty na drone. Ny fanaraha-maso ny fifandraisana amin'ny onjam-peo dia safidy hafa tsy mifanaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny famantarana ny ahiahy.
Pros sy ny tsy firaharahan'ny rafitra tsy miara-miasa. Loharano: WildAid / TNC
Ireo rafitra tsy miasa rafitra Pros
Ny rafitra tsy miara-miasa
Ny radars dia tsara indrindra ho an'ny fanandramana miditra ho an'ny sambo goavana ho an'ny 30 kilaometatra maromaro (nm).
Optik, lahatsary, ary fitaovana fakan-tsarimihetsika dia tsara indrindra ho an'ny fanandramana sambo ho amin'ny 10 nm.
Ankoatr'izany dia afaka mipetraka amin'ny drones izy ireo ho an'ny fanampiny 20-30 nm amin'ny fandrakofana.
Ny fanaraha-maso ny radio dia mety ho fomba mandaitra mahomby mba hamantarana asa mampiahiahy.
Ny fanamarihan'ny maso ataon'ny mpiandraikitra sy ny mpandray anjara dia voafetra amin'ny 8 nm ary mety amin'ny fampiharana ny rafitra fampiharana ny fiarahamonina. Izy ireo no lafo indrindra ary mahomby amin'ny fikorontanan'ny rivotra.
Ny radars dia tsy mahavita mihoatra ny 6 kilaometatra maromaro avy any amoron-dranomasina raha ny fahitana ny sambo kely misy laka sy fibre.
Optical, video and infrared cameras are limited to 10 nm.
Kamerona ny infrarozia lafo.
Ny drone dia lafo, mihamitombo ny vidiny satria mihamaro lavitra noho ny 5 nm.
Ny fanaraha-maso ny ràla dia mitaky mpiasa sy voatokana.
Ny fanamarihan'ny maso ataon'ny mpiandraikitra sy ny mpandray anjara dia voafetra tsotra izao amin'ny 8 nm.
Fanaraha-maso fitsikilovana feno
Tsy misy mpamatsy iray afaka manome fandrakofana feno, ka ny rafitra fanaraha-maso dia matetika ampiasaina amin'ny alalan'ny fitaovana samihafa amin'ny rafitra iraisana. Mba hamaritana ny teknolojia ilaina amin'ny fananganana rafitra fanaraha-maso, dia ilaina ny mandinika ny halaviran-toerana, ny habeny, ary ny karazana fitaovana ampiasaina amin'ny sambo (hazo, fiberglass, na aluminium). Ohatra, ny radars na ny kamiao ambony dia azo ampiasaina miaraka amin'ny VMS transceivers sy AIS. Ny radars na ny fakantsary dia azo apetraka eo akaikin'ny toerana fanjonoana mahavokatra mba hahitana ireo sambo izay nandroaka ny mpandàla ny VMS ary manjono ao amin'ny faritra voarara. Jereo ny sary eto ambany ho an'ny antsipirihany momba ny karazana fiasa mifandraika amin'ny fiaraha-miasa sy tsy miara-miasa ary ny sehatra fandrakofana mifanaraka amin'izany.
Sarin'ny rafitra mpanara-maso fanaraha-maso. Loharano: WildAid / TNC
Ho any amin'ny Enforcement Chain (ambony)
Ny fandaharam-pampianarana feno momba ny lohahevitra ao amin'ny tabilao etsy ambany dia takiana mba hanamafisana ny fahaiza-manaon'ny ekipa mpitantana sy ny fampiharana.
Fanaraha-maso, fanakanana sy fisavana • Fandaminana fiomanana sy fiomanana
• Fampiasana fitaovana maso sy maso elektronika ho an'ny patrôles
• Fihetseham-pandehanana: fanaraha-maso, antontan-taratasy takiana, inona no hijerena sy hikaroka, manadihady ny fisavana. Ny fampiofanana dia tokony hampiditra mpampanoa lalàna.
• Famotopotorana sy fitokonan'ny ekipa mampiahiahy
• Fihetsiketsika momba ny heloka bevava. Fanangonana sy fikarakarana porofo
• Tatitra mahomby. Zavatra sy fampahalalana tokony hiditra ao anaty tatitra
Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fisorohana maritim-pirenenan'ny IMO (IMO) • Vonjy taitra
• Afindra any an-dranomasina
• Ady amin'ny ady
Fandaminana fiaraha-miasa sy fitantanana ny sampan-draharaha misahana ny fitantanana • Ny andraikitry ny foibe fitantanana, anisan'izany ny fanombanana ny risika, ny fampiasana ny fananana, ny tatitra, ny protocols amin'ny serasera, ny fanaraha-maso sy ny fanamafisana ny antontan-kevitra
• Lalana mifehy ny fifandraisan-davitra sy ny fomba fiasa miaraka amin'ny mpiambina ny morontsiraka
• Tatitra ara-toe-karena sy tatitra momba ny zava-misy
• Famakiana sy fampiasana tabilao marika
• Famakiana sy fampiasana sarintany
• Mitadiava sy manavotra
• Manome tolotra fanampiana voalohany eo amin'ny sehatra
• Fiheverana ny filaminana manokana mandritra ny fitsangatsanganana sy ny fialana
Fampiofanana fototra sy haingana amin'ny fisorohana fiara eo amin'ny fiara • Toeram-piantohana fototra amin'ny alàlan'ny baoritra natolotry ny mpanamboatra
• Ny mpitaingina roa na roa dia tokony asaina hanatrika ny fiomanana amin'ny alàlan'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fiara sy ny fanamboarana kritikiana.
Soso-kevitra hapetraka amin'ny programa fanofanana hampiharana ny fampiharana. Loharano: WildAid
Fitsaboana ampiasain'ny mpampiofana manara-maso ny fampiofanana
Ny fepetra fampiharana serivisy (SOPs) dia hiantoka fa ny fampiharana ny ezaka dia atao amin'ny fomba mahomby, mitarika asa andavanandro ary manangana andrim-pamokarana ara-piraisana. Ny SOPs, miaraka amin'ny tatitra tsara sy ny paikady mahomby, dia manampy ny mpiasa vaovao hianatra asa, valiny, ary fomba haingana. Ho fampitomboana ny fahombiazan'izy ireo, ny SOP dia tokony havaozina tsy tapaka araka ny fampidirana sy ny traikefan'ireo manampahefana. Raha kely indrindra, ny SOP dia tokony hivoatra amin'ny lohahevitra manaraka:
Ny ivontoerana fanaraha-maso dia tokony hampiasa olona iray farafahakeliny iray amin'ny fotoana rehetra ary indrindra indrindra ny miasa 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro. Ny mpiandraikitra ny serivisy dia mampita ny fahasarotana rehetra sy ny zava-mitranga rehetra amin'ny mpitsara mpanara-maso. Ny foibem-pitantanana dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny vaovao momba ny sambo akaikin'ny faritra voamarina ary ireo miditra sy mivoaka ny faritra voamarina. Ny andraikitry ny foibe dia ny:
Mitantana sy miantoka ny fifandraisana eo amin'ny mpiandraikitra, ny sambo, ary ny mpitantana, ary koa amin'ny fikambanana hafa.
Miasa amin'ny fiasa miasa. Ny foibe koa dia mametraka ny fifindrana (na fandraràna) ary mandefa fanampiana araka izay ilaina.
Fikojakojana ny tahirin-tsakafo rehetra, anisan'izany ny mpampiasa sy ny SOPs. Fifandraisana amin'ny maso ivelany sy fitantanana vaovao miafina.
Fikojakojana ny teknolojia sy ny fanaraha-maso ny fambolena.Karazana fa ny mombamomba ny mpiasa dia mifanaraka amin'ny filàna ara-drariny amin'ny lahatsoratra samihafa.
Fanamarinana mialoha ny fiainganana: hamarino fa miasa avokoa ny refy sy ny tondro amin'ny tetezana, andrana ny rafitra fanaraha-maso sy ny hafainganam-pandeha, manomana hazo mandeha, fitaovana manokana, fitaovana fitetezam-paritra - radar, GPS, feo fanamafisam-peo, tabilao, DF, zahao ny bokin'ny kaontin'ny sambo ary voamarika tsara tamin'ny nanombohan'ny fisafoana, ary atsangano ny jono iraisam-pirenena manan-danja mba hampisehoana fa manao fisafoana amin'ny jono ianao.
Fanaraha-maso ny fitaovana hafa: mahazo tatitra momba ny milina ary manamarina fa mandeha miasa ny radio; Mitandrema fa fitaovam-pitaovana toy ny jakebakelan'ny aina, lozam-pifamoivoizana, basy, basy tanana, fipoahana, sainam-pasika, fandrefesana fandrefesana, na fitaovana hafa momba ny fanjonoana fanjonoana.
Fanolorana ny tatitra mialoha ny fialana amin'ny tale mpanatanteraka na mpanara-maso.
Fametrahana paikady fanaraha-maso, toy ny fiarandalamby maromaro, manara-maso ny mpitarika ny mpanara-maso, ny fiaramanidina, ny fitsangatsanganana an-dalambe, ary ny fikarakarana ny fikarohana.
Ny fanaraha-maso ny fisavana dia miankina amin'ny firenena sy iraisam-pirenena fisorohana sy fisintonana an-dranomasina ary tsy maintsy mandray an-tanana ny karazana hetsika mety, amin'ny fanitsakitsahana ny fanjonoana amin'ny heloka bevava lehibe, toy ny fanondranana zava-mahadomelina zava-mahadomelina, ny fanaovana pirinty, ny fanompana na ny famonoana olona. Ny fanaraha-maso eo amin'ny fiandrasana dia mety hihaona amin'ny valinteny mitam-piadiana sy fankahalana. Noho izany, ny taha ambony indrindra amin'ny fisorohana sy ny fanaka dia azo raisina. Raha kely indrindra, ny SOPs dia tokony:
Mamaritra raha toa ka asiana fitahirizana ny patrôles.
Fantaro ny halavirana sy ny haingam-pandeha hoentina hidirana sy higadra.
Fenoy ny fepetra fanofanana kely indrindra ho an'ny mpiasa amin'ny fanaraha-maso ny karazana sambo isan-karazany sy ny loza mifandraika aminy.
Fametrahana mari-pahaizana momba ny baikon'ny baiko, ny fanaraha-maso ary ny fanombanana ny toe-draharaha misy eo an-toerana (ohatra: ny fiakaran'ny heloka bevava iray).
Manangàna famelabelarana momba ny fifandraisana mba hitazonana fifandraisana tsy tapaka amin'ny foibe fanaraha-maso (ohatra: manao fanaraha-maso isan-karazany isaky ny 15 minitra).
Amboary ny fampiasana finday na fakantsary manokana rehefa manao fanaraha-maso fitsangantsanganana (azo atao ny miaro ny fahombiazan'ny fiasa). Avelao ny mpitarika ekipa hampiasa azy ireo.
Fanenjehana sy fanamasinana
Ny rafitra fampiharana dia mitaky fanasaziana mahefa heloka bevava, sivily, ary / na fitakiana ara-panjakana sy hetsika fanasaziana. Ny fanenjehana dia tsy mitovy amin'ny firenen-drehetra, fa ny dingana famaizana amin'ny fanitsakitsahana ny tontolo iainana dia matetika miadana. Ny rafitra fanaraha-maso mahomby dia manan-danja mba hisorohana ny fahantrana sy ny fitsapana very, izay miteraka fahavoazana ara-toekarena ho an'ny fanjakana amin'ny alàlan'ny loharanom-pahavoazana sy ny fahaverezan'ny renivola voajanahary. Na dia tsy manan-tsahala amin'ny firenena tsirairay aza ny rafitra ara-dalàna dia tokony hodinihina amin'ny fampivoarana ny rafitra fampiharana ny sazy manaraka:
Sazy famonoan'olona / sivily. Ireto fihetsiketsehana manaraka ireto dia soso-kevitra hanatsarana ny fizotry ny fitsarana:
Manangana rafitra fitakiana an-taribia miaraka amin'ny toro-hevitra avy amin'ny biraon'ny manam-pahefana.
Manofa mpiandraikitra hanofana ny tatitra araka ity format ity.
Manaova fanamafisana ofisialy ofisialy ny mpiandraikitra mpitantana ny faritra sy ny mpiara-monina aminy ary / na federaly.
Manatontosa atrikasa fampiofanana ho an'ny mpitsara, mpisolovava, ary mpisolovava indray mandeha isan-taona amin'ny fitsipika sy fitsipika momba ny sambo sy fiarovana.
Manendre mpisolovava hafa avy amin'ny fikambanana tsy miankina na sampana mpanohana mba hanaraka ny fanitsakitsahana an-dranomasina momba ny tontolo iainana na ny heloka bevava.
Manangana fanenjehana tsy miankina amin'ny raharaha lehibe amin'ny fampiasana mpisolovava avy any ivelany.
Sazy ara-panjakana. Mba hanatanterahana ny dingana famaizana, raha azo atao ny fanasaziana ara-panjakana amin'ny sehatra eo an-toerana. Ny henjana amin'ny fepetra dia tokony hifanaraka amin'ny maha-zava-dehibe ny fandikana. Tokony horaisina ihany koa ny sazy tsy ara-toekarena, ohatra:
Fitànana am-ponja mandritra ny fotoana voafetra;
Famerana ny fahazoan-dàlana halefa;
Fanamboarana fitaovana fanjonoana;
Fametrahana fahazoan-dàlana fahazoan-dàlana ho an'ny sambo, mpikambana amin'ny ekipa, na tompona sambo;
Famerenana ny fahazoan-dàlana hiasana ho an'ny sambo, tompona sambo, mpiasa, mpiasa an-dranomasina, na mpanjono.
Iza ireo mpampihorohoro miverimberina: Manadihady ny fanafody
Ny fanadihadiana sy ny fanoratana fototra fototra momba ny zava-nitranga dia mety hanazava ny antony manosika ny heloka bevava sy ny fanampiana amin'ny fanaraha-maso eo an-toerana ary ny fametrahana haingana ireo mpandika lalàna. Ny tahirin-kevitra tsotra momba ny fandraketana sy ny fanaraha-maso ny vaovao momba ny fandikana dia tokony hiorina izay ahitana fampahalalana fototra mikasika ny fandikan-dalàna (izany hoe fanjonoana ao amin'ny faritra tsy misy) ary ny mpanao heloka bevava (izany hoe ny anaran'ny sambo, ny anaran'ny kapiteny / mpanjono). Ankoatra izany, ny tahiry dia afaka manome fampahalalana mahasoa ho an'ny mpitantana rehefa mikarakara sy manomana patroly mba hahafahana manome tetik'ady mahomby sy mora.
Ny tahirin-kevitra dia tokony ho azon'ny sampan-draharahan'ny lalàna fampiharana ny lalàna ary mamela ny fampidirana ny rakitsorany mba hanomezana ny mombamomba ireo mpandika lalàna.
Ny rafitra fampiharana mahomby dia mitaky vola. Na izany aza, ny ankamaroan'ny ezaka amin'ny fampiharana ny alàlan'ny fitaovam-pitaterana an-dranomasina dia mahazo ny fanohanan'ny governemanta afovoany, ka mamela ireo mpitantana ireo loharanom-bola kely mba hampiharana ny lalàna. Ny saram-mpampiasa sy ny fitomboan-tsakafo ara-tsosialy dia fomba iraisan'ny roa tonta mba hanohanana ny ezaka fampiharana.
Feo mpampiasa Ny governemantan'i Ekoatera sy Palau dia nanangana haba voaaro hiarovana mivantana mba hanohanana mivantana ny fiarovana. Ny hetra maitso ao Palau, ohatra, dia manangona mihoatra ny $ 5M isan-taona, raha toa ny fampindramam-bola entana Galapagos ka manangona manodidina ny $ 1M ho fampiharana azy ao amin'ny tahirin-dranomasina. Ireo teti-bola enti-manentana ireo dia ara-politika, fanintelon'ireo mpizaha tany izay te hanampy amin'ny fiarovana ny harena voajanahary sy ny kolontsaina ary afaka manome fanampiana ara-bola ho an'ny fampiharana. Indrisy anefa, ny rafitra ara-dalàna any amin'ny firenena maro dia tsy mamela ny famoronana sy ny fitantanana ny saram-mpampiasa. Vokatr'izany, ireo sampan-draharaha misahana ny fitantanana ny harena an-kibon'ny tany sy ny MPA dia namolavola fifanaraham-piarahamonina niaraka tamin'ireo ONG, mpizahantany fizahan-tany, na vondrom-piarahamonina mba hampitombo ny vola sy ny fahafaha-manao amin'ny ezaka fampiharana. Ohatra, ny ONG WildAid dia mitantana ny fanomezana avy any ivelany amin'ny indostrian'ny fizahantany ho an'ny sampan-draharahan'ny National Park Galapagos mba hividianana fonenana saro-bidy sy fanamafisana ny fanamainana.
Fandaniam-bola amin'ny asa Ny programa fampiharana dia tokony hijery ihany koa ny fampitomboana ny tombam-bidin'ny asa. Ao amin'ny programa valin'ny WildAid, amin'ny ankapobeny 70% ny saram-pitsaboana an-dranomasina dia ahitana salantsalan'ny olona sy solika. Farafahakeliny paikady roa dia afaka manohana ny fampiharana ny fampiharana mahomby izay mampihena ny fandaniana amin'ny fadiranovana ary manome toky fa mbola azo tanterahina ny faritra azo jerena:
1) Famatsiam-bola azo avy amin'ny famatsiam-bola. Zava-dehibe ny manadihady ny mpanjono / ny mpampiasa, ny mpandika lalàna, ny faritra jeografika, ary ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatr'asa rehefa manamboatra rafitra fampiharana. Ny fiasan'ny mpiasa, ny fitaovana fanaraha-maso, ny isa sy ny karazana fanjairan'ny jono, ary ny haben'ny motera ivelany dia ny sasantsasany manan-danja tokony hodinihina amin'ny famolavolana rafitra fampiharana.
Izay tsy tokony hatao: Toerana maro no mahatonga ny fahadisoana amin'ny fananana mpamatsy iray na solontenan'ny varotra mametraka ny teknolojia na ny rafitra fampiharana ny rafitra, izay matetika no mahatonga ny rafitra izay mendri-kaja sy sarobidy ho an'ny faritra manokana. Misy ohatra marobe avy amin'ny sambo nomena vola izay mamarana bebe kokoa amin'ny fihazonana azy ireo amin'ny fotoana maharitra fa tsy mendrika hanaovana ezaka fampiharana.
2) Mampiasa-Teknolojia mifanaraka. Ny tetikady fampiharana izay mampifandray ny teknolojia miaraka amin'ny patrôle dia tena mahomby indrindra. Satria ny ankamaroan'ny tranonkala dia manana rafitra an-dranomasina voafetra, ny rafitra dia azo ampiasaina izay mampifandray ny fampiasana ny fanaraha-maso fanaraha-maso miaraka amin'ny fametrahana fitobiam-pahefana ho an'ny fananganana sambo mpitrandraka izay mijanona amin'ny fifandraisana am-pifandraisana akaiky amin'ny manampahefana misahana ny fifamoivoizana ary tsy mamaly raha tsy misy ny fanitsakitsahana mety miseho. Na dia tsy manala ny filan'ny pataloa sasany aza io paikady io, dia mampihena ny habetsaky ny solika ampiasaina, satria mety hipetraka anaty lay mandritra ny fotoana maharitra ny sambo.
Izay tsy tokony hatao: Mitondrà patrouillie tsy tapaka izay mitaky fotoana, solika, ary akanjo sy fiara amin'ny fiara sy ny sambo.
Rahoviana afaka mividy vola ianao rehefa mividy fitaovana?
Ny fametrahana ny fitaovana finday Global Positioning System (GPS) ho an'ny sambo rehetra patrol dia nohamarinina. Izany dia ahafahana mandefa ny fitsangatsanganana atsy aoriana kely kokoa amin'ny Google Earth sy Google Maps. Ny tontolon'ny Google dia ahafahan'ny mpitantana mijery ny lalan-jiro, manamarina ny halaviran-dalana lavalava, ary mamantatra ny tsy fandriam-pahalemana, toy ny fahasamihafana eo amin'ny halaviran-dàlana sy ny habetsaky ny solika nampiasaina, izay mety manambara ny fivarotana gazy tsy ara-dalàna any an-dranomasina.
Fanabeazana sy fitoriana
Mpanao jono iray avy amin'ny Sampan-draharaham-Pirenena Nasionalin'i Papouasie-Nouvelle-Guinée dia nampianatra kilasy fianarana trondro ho an'ireo mponina ao Potou eo amoron'ny Nosy Lolobau ao Kimbe Bay, faritanin'i West New Britain. Ny tanànan'i Potou dia mandray anjara amin'ny drafitra ho an'ny faritra voaaro eny an-toerana (LMMA), ampahany amin'ny tambajotra maranitry ny faritra voaaro an-dranomasina noforonina tao Kimbe Bay. Sary @ Mark Godfrey
Amin'ny toerana maro isian'ny fampiharana ny fahombiazana dia manana anjara toerana lehibe ny fividianana vondrom-bahoakam-piarahamonina sy ny mpandray anjara mahomby. Ny fanabeazana sy ny fanentanana dia zava-dehibe amin'ny fampiroboroboana ny fahalalan'ny vondrom-piarahamonina sy ny fanajana ny lalàna sy ny fitsipika ary mety hitarika amin'ny fampiharana eny ifotony. Raha vao misy ny lalàna mifehy, ny ekipa mpampihatra masoivoho dia tokony hamolavola drafitra fanabeazana tsotra sy fitoriana ho an'ny mpanjono eo an-toerana, mpanjono vahiny, mpandraharaha fizahan-tany ary vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Ny hetsika tokony hodinihina dia misy:
Famolavolana sy fizarana sehatra tsotra iray mamaritra ny zoning, ny fitsipika, ny famerana, ary ny sazy na sazy;
Fanambarana ireo mpiandraikitra mpitandro filaminana amin'ny asa fitoriana;
Lisitry ny fitsipika amin'ny seranana manan-danja sy ny fiaraha-miasa mpanjono;
Radio sy televiziona;
Fikirana amin'ny sekoly ambaratonga fototra sy sekoly ambaratonga faharoa miaraka amin'ny fampiratiana, horonan-tsary, ary fifanakalozan-kevitra tsy ara-potoana;
Fampahalalana ao amin'ny biraom-panjakana;
Boky napetraka tao amin'ny seranam-piaramanidina sy fizahantany fizahan-tany;
Fananana (T-shirts sy bras).
Mpilalao baolina kitra Ekoatoriana eran-tany, Ulises de la Cruz, mampiseho fanohanana ho an'ny fanentanana Shark. Sary © WildAid
Ny fifandraisana mahomby amin'ny mpandray anjara isan-karazany dia tena ilaina amin'ny ezaka fampiharana mahomby. Raha te hianatra bebe kokoa momba ny fomba fiasa sy ny fampiharana ny fifandraisana amin'ny fifandraisana misokatra amin'ny varavarankely vaovaokitiho eto.
Ny fahazoana "tratra" dia mety fotoana iray ahafahana manabe.
Raha misy lalàna vaovao na fampiharana fampiharana vaovao napetraka, na ny drafitra tsara indrindra dia mety tsy hahatratra ny mpampiasa / mpandray anjara. Noho izany, mety ho tsara kokoa ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina raha toa ka efa ampiharina amin'ny fomba ofisialy ny fampiharana ny lalàna, izay nampitandremana voalohany ny fandikan-dalàna mikasika ny fe-potoam-pitsarana 6-12, fa amin'ny fotoana kosa, ny manampahefana dia mametraka 'sazy henjana'.
Ny fampahalalana ato amin'ity fizarana ity dia nomen'i misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWildAid. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, miangavy misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWildAid.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToro-lalana momba ny fampihavanam-pirenenamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTurinffe Atoll Marine Reserve: rafitra fanaraha-maso sy fahamalinanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoValin'ny fandinihan-tany tany Palau Avaratra: Fanaraha-maso sy fandanjana rafitramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFakana an-keriny tany amin'ny Ranomasina Avaratra
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMandrindra ny tahirin-dranomasina Galapagos
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTrends vao haingana amin'ny fanaraha-maso, fitantanana sy fanaraha-maso ny fisamborana fisotroana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Valan-javaboarin'i Galapagos dia manakana ny fanimbana ny lalao Cat sy Mouse